सावधान ! झुक्किएर पनि यस्ता कुराहरू गुगलमा सर्च नगर्नुहोस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > सावधान ! झुक्किएर पनि यस्ता कुराहरू गुगलमा सर्च नगर्नुहोस्
Poonam August 19, 2021 समाचार 0
आफ्नो घरमा ल्यापट चलाउँदै एक चिनियाँ युवती ।अचेल मानिसहरू सबै भन्दा बढी मोबाइल र ल्यापटपमा भुल्छन् । इन्टरनेटको विस्तारसँगै मानिसहरूमा यो लत बसेको हो । त्यति मात्र नभएर उनीहरू मोबाइल तथा ल्यापटपमा विभिन्न सर्च इन्जिनहरूबाट लेखेर तथा भ्वाइसमार्फत आफू अनुकूलका सामग्री सर्च गर्छन् ।
यसबाट उनीहरूले क्षणिक आनन्द लिए पनि पर्न सक्ने जोखिमबारे सचेत हुँदैनन् । यसरी पटक(पटक एउटै कुरा धेरै सर्च गर्ने मानिसहरूलाई अनुसन्धान एजेन्सीहरूले मनिटर गरिरहेका हुन्छन् ।
एक दुई पटक बेवास्ता गर्न सक्छ तर पटक–पटक सर्च गर्नाले तपाईँलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गर्न सक्छ । केही सर्च गर्न नहुने कुराहरू छन् जुन गुगलमा खोज्नुभन्दा सम्बन्धित साइट नै खोलेर हेर्न इन्टरनेट सुरक्षा विदहरुले सुझाव दिएका छन् ।
१) चाइल्ड पो’र्न
पो’र्नलाई लिएर पछिल्लो समय निकै बहस भएको छ । भारत र नेपालमा चाइल्ड पो’र्नसँग सम्बन्धित जानकारी राख्न र बढवा दिन गैर कानुनी हो । यदि तपाई गल्तीले चाइल्ड पो’र्न सर्च गर्नुहुन्छ भने पनि सावधान हुनुहोस् ।
२) औषधि किनबेच :
गुगल प्ले स्टोरमा धेरै यस्ता मोबाइल एप्प छन् जसबाट तपाई औषधि किन्न सक्नुहुनेछ । तर त्यसको लागि तपाईँले डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन देखाउन अनिवार्य छ । यदि कुनै डाक्टरको स्वीकृतिविना नै औषधि किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाई समस्यामा पर्न सक्नुहुनेछ । अनुसन्धान एजेन्सीहरू ती मानिसहरूमाथि पनि मूल्याङ्कन गर्छन् । जसले गुगलबाट ओषधि किन्छन् ।
३ ) कसैको व्यक्तिगत खोज्नु :
यस्तो कुनै जानकारी गुगलमा सर्च नगर्नुहोस् जसले अरूको आन्तरिक विषयमा सङ्केत गर्दछ । जस्तै (लोकेसन, अफिस र घर) को बारेमा सर्च नगर्नुहोस् । उदाहरणको लागि तपाई गाउँको लोकेसन त सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तर प्रत्यक्ष एड्रेस हालेर गुगलमा सर्च गर्नु तपाईँका लागि खतरा हुनसक्छ ।
४ ) ब’म बनाउने तरिका :
त्यस्तै कानुनले निषेध गरेका केही त्यस्ता कुराहरू पनि सर्च गर्नु हुँदैन । पटक–पटक सर्च गर्दा तपाई समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ । अनुसन्धान एजेन्सीहरू तपाई माथि मनिटर गरिरहेका हुन्छन् ।
५ ) अनलाईन बैकिङ वेबसाइट
यदि तपाईलाई आफ्नो बैंकको वेबसाइट थाहा छ भने गुगलमा अनलाईन बैंकको युआरएल अर्थात वेभ एड्रेस सर्च नगर्न सुझाव दिइन्छ । कतिपय अवस्थामा स्क्यामर ९इन्टरनेटमा ठगी गर्नेहरु० ले बैंकको जस्तै मिल्दोजुल्दो वेभसाइट बनाएका हुन्छन् । यसको ठेगाना र लुक्समा केही मात्र फरक हुन्छ । कतिपय बेला यस्तो नक्कली साइटमा युजरहरुले आफ्ना संवेदनशील सूचना टाइट गर्छन् । त्यसबेला उनीहरु धोकाधडीको शिकार बन्ने गर्दछन् ।
६) कस्टमर केयर नम्बर
७ ) मोबाइल एप्स र सफ्टवेयर
८) फ्रि एन्टिभाइरस या सफ्टवेयर
९ ) डिस्काउण्ट कुपन कोड
जहाँ बेहुलाको साथीहरुले बिवाहकै दिन उतार्छन् बेहुलीको कपडा आफ्नो काँधमा राखेर उठाउँछन्